Crypto: Andao hataontsika tsara indray ny GNU / Linux! Miaraka amin'ny Cryptocurrency? | Avy amin'ny Linux
Isika rehetra izay miaina isan'andro sy mazoto amin'ny Tontolo GNU / Linux, na, toy ny mpampiasa isan'andro na matetika mitovy, toy ny Ireo matihanina amin'ny IT sy / na ireo mivelatra mifandraika amin'izany, fantatsika lehibe, manan-danja ary ilaina inona izao GNU / Linux, ao anatin'ny Tontolon'ny rindrambaiko malalaka sy loharano misokatra, amin'ny faritra toa ny supercomputing, ivon-kevitra (serivera), fikarohana siantifika ary zavatra hafa mitovy na manan-danja kokoa.
Na izany aza, ny GNU / Linux como el Operating System Mbola lavitra ny lalan-kizorana handreseny amin'ny fomba maro an'isa ny tontolon'ny birao misy ny solosain'olon-tsotra, na an-trano izany na any amin'ny birao. Mandritra izany fotoana izany, tetikasan'ny rindrambaiko malalaka sy loharano misokatra malalaka kokoa toa ny Cryptocurrencies dia nanana fiakarana mafy tokoa tato anatin'ny folo taona lasa, hatramin'ny namoronana ny Bitcoin. Noho izany, mety hisy hanontany hoe: Inona no azo atao hanararaotana ny fipoahana Cryptocurrency ho an'ny GNU / Linux?
Amin'ity lahatsoratra ity tsy hanome hevitra izahay pitsopitsony ara-teknika na ara-bola momba ny CryptocurrenciesNa izany aza, ho an'ireo izay mety liana amin'ireo lohahevitra ireo dia manana izahay lahatsoratra teo aloha Mamporisika ny hamaky izahay, ary anisan'ireto manaraka ireto araka ny filaharany:
Eny, efa namaky ireo sy / na ianao ny boky sy gazety hafa mifandraika amin'ny Tontolo Crypto, na fantatrao ny lohahevitra, ary ny FinTech ary / na DeFi, azo antoka fa fantatrao ny fipoahana sy ny maha zava-dehibe ankehitriny ny Bitcoin manana, eo akaikin'ny Teknolojia Blockchain amin'ny vanim-potoana maoderina sy fiarahamonina misy antsika.
1 Crypto: tontolo malalaka sy malalaka
1.1 Ahoana no ahafahan'ny World Crypto mampitombo ny GNU / Linux lehibe kokoa?
1.2 Fa ahoana no nahatonga an'izany?
Crypto: tontolo malalaka sy malalaka
Ahoana no ahafahan'ny World Crypto mampitombo ny GNU / Linux lehibe kokoa?
Mampiditra ny lohahevitra mahaliana antsika, tsara ny manasongadina indray fa, Cryptocurrency dia vokarin'ny filozofia amin'ny fampandrosoana malalaka sy malalaka, toy ny:
"Ny kaody loharanom-cryptocurrency dia matetika misokatra sy maimaim-poana, noho izany dia manome antoka ny mety hisian'ny fanaraha-maso maharitra ny rindrambaiko ary noho izany dia miantoka fa tsy misy ny hetsika hosoka atao miaraka amin'izy ireo na amin'ny sehatra fanohanana azy ireo (Blockchain / Blockchain), izay tsy inona fa ny boky kaontim-pahefana itsinjaram-pahefana izay ny firaketana dia voarakitra am-pahibemaso na ampahibemaso ary ny fifandanjana tsy misy ifandraisany amin'ny mpampiasa, fa amin'ny adiresy fehezin'izy ireo.". Crypto-anarchism: Rindrambaiko maimaim-poana sy ny vola ara-teknolojia, ny ho avy?
Vokatr'izany, ary tamin'ny fanesorana lojika, raha vondrom-bahoaka, orinasa ary firenena maro dia maro no nanomboka nifindra monina, na ny hetsika ara-barotra, ny harenany (vola) ary mety ho ny «Vola Fiat nasionaly» IRETO teknolojia itsinjaram-pahefana sy fananana crypto nomerika:
Tsy lojika ve raha mandeha amin'io lalana io ny GNU / Linux?
Fa ahoana no nahatonga an'izany?
Azo antoka fa maro, anisan'izany ny tenako, no mety hanana hevitra na tolo-kevitra, miankina amin'ny haben'ny fahalalana an'io saha io teknolojia sy volaNa izany aza, ny fampiraisana marina ireo faritra 2 ireo dia tsy hafahafa fa, amin'ny fotoana sasany, ny Community (Users, Organisations and / or miavaka Fototra) izay mihodinkodina manodidina GNU / Linuxary ny Free Software ary ny Loharano misokatra afaka manana a Fananana crypto ofisialy, izay mifanaraka amin'ny fepetra rehetra ilaina amin'ny Fiarovana, fiainana manokana, tsy fantatra anarana, fahalalahana ary fahombiazana izay takian'ireo mpikambana ao aminy na antenaina.
Mazava ho azy fa maro amintsika no mahalala fa ny olona misy ifandraisany amin'ny Tontolo GNU / Linux dia tia Tsy manana fomba fijery tsara i Richard Stallman rehefa mifangaro izy ireo Cryptocurrencies + Governemanta, ary fantatsika tsara ny toerana misy azy io teknolojia fandoavana nomerika maimaimpoana antso GNU Taler, izay tsy mamporisika na manome tombontsoa ny fampiasana ny Fananana crypto malalaka sy misokatra, fa manalava ny fampiasana ny «Rafitra vola Fiat» izay taloha, voafidy ary nakatona. Vakio bebe kokoa momba ny GNU / Taler eto.
Richard Stallman, tsy matoky bitcoin ary manome sosokevitra ny fampiasana ny GNU Taler
GNU Taler 0.7 dia efa navotsotra, fantaro ity rafitra fandoavam-bola elektronika maimaim-poana ity
Na izany aza, raha fintinina, matetika aho dia iray amin'ireo mino fa a Cryptocurrency ofisialy ho an'ny fiarahamoninay Mety hanamora sy hampiroborobo ny mpampiasa, ny vondrom-piarahamonina ary ny fikambanana, ny lafiny toy ny:
Fanomezana sy famatsiam-bola amin'ny tetikasa.
Fanonerana na fandoavana asa / fanampiana / serivisy / fampiharana.
Ny fampiroboroboana sy ny fampitomboana ny GNU / Linux Distros.
Tokoa, "Ilay iza" sy "Ny fomba"Ho zavatra tena mahaliana ny mahita ny fomba hitrangany. Mandritra izany fotoana izany dia hitohy ny fandrosoan'ny fotoana, ny haitao miaraka aminy, ary azo antoka raha toa ka Teknolojia Blockchain miafara amin'ny fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny ara-bola manerantany, tsy hafahafa ny mahita ao anatin'ny taona vitsivitsy, tsy ny maro fotsiny "Cryptocurrency nasionaly" fa koa a Fananana crypto ofisialy ho an'ny vondrom-piarahamoninay.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fomba ahafahana «El Mundo Cripto» manampy mitombo «Mundo GNU/Linux» amin'ny habaka tsy maharesy, manao azy ho malaza kokoa, mahasoa ary tena ilaina; dia mahaliana sy mahasoa indrindra, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Crypto: Andao hataontsika tsara indray ny GNU / Linux! Miaraka amin'ny Cryptocurrency?
Yoshiki dia hoy izy:
Raha ny tenako manokana dia tsy hanohana cryptocurrency aho raha toa ka manana karazana teknika teknika ahafahan'ny tsy mitonona anarana ireo tompon'andraikitra amin'ny raharaham-barotra, raha sanatria ka fantatry ny polisy (na manana ahiahy efa niorina tsara) fa io fifanakalozana io dia natao farany. hetsika tsy ara-dalàna lehibe indrindra, toy ny fampihorohoroana na sary vetaveta amin'ny ankizy. Saingy mandritra izany fotoana izany dia tiako fa ny fahaverezan'ny anarana tsy fantatra anarana dia mety hitranga amin'ny toe-javatra toy izany, fa tsy ny hafa (ary noho izany, ny rafitra dia tsy nanala ny tsy fanatononan'ireo mpampiasa ara-dalàna). Tsy haiko raha amin'ny sehatra teknika dia mety hisy zavatra toa an'io, fa raha ny fitsipika etika dia io ihany no hitako fa azo ekena.
Ny vola nomerika nomerika tsy mitonona anarana 100% dia zavatra tsy hotohanako mihitsy. Ny fanompoana mpanao heloka bevava amin'ny lovia volafotsy dia rafitra tsy hita maso mba hahafahan'izy ireo mivarotra na manao ireo asa ratsy indrindra, miaraka amin'ny risika farany ambany. Raha jerena izany dia matetika lazaina fa "hataon'izy ireo na tsy misy cryptocurrency", saingy tsy fomban'ny fampitahana diso, satria tranga roa no ampitahaina maivamaivana, toy ny hoe mitovy na farafaharatsiny farafaharatsiny, raha ny marina ny hafa tanteraka ny scenario. Ny famindrana orinasa toy ny sary vetaveta ataon'ny ankizy amin'ny tontolo tena izy, eny an-dalambe, dia mampidi-doza tokoa, ary ny vintana hamela ny dian-tongotra sy ny dian-tongotra amin'ny karazany rehetra dia maro; hanana fomba maro hanatratra azy ireo ny polisy (izany no antony saika nanjavona izany orinasa izany tamin'ny taona 80). Mifanohitra amin'izany aza, ny fanaovana izany amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny tombotsoan'ny anarana miafina tanteraka dia mety tsy ho tsikaritra tsotra izao, ary noho izany dia tavela mifamatotra ny tanany. Ary midika izany fa avelanao tsy misy fitsarana ireo niharam-boina (aka zanaka) tamin'io raharaha io, ary ny fijaliana rehetra nanjo azy ireo (ary namoy ny ainy mihitsy aza).
Mazava ho azy, fantatro fa misy valiny hafa ihany koa io: ny tsy fisian'ny anarana tsy mitonona anarana amin'ny tambajotra, dia midika fa ny governemanta dia afaka mahafantatra ny zava-drehetra momba ny olom-pireneny ary azo antoka fa mety hampidi-doza (indraindray * tena mampidi-doza), indrindra any amin'ireo governemanta manam-pahefana toa azy Russia, na amin'ny didy jadona toa an'i Shina (ary na any amin'ny demokrasia toa ny EU na Etazonia aza dia tsy mety izany). Fa farafaharatsiny amin'ireny tranga ireny, raha mbola misy ny demaokrasia dia azo atao foana ny mampihatra ny hafanam-pon'ny olom-pirenena ary manohitra izany fepetra izany, mitady lalàna amin'ny fomba x, sns Misy toerana hanaovana fanodinana. Etsy ankilany, ny olon-tsotra tsy afaka mandeha mamonjy ankizy nalaina ankeriny tamin'ny tambajotran-tsary mamoa fady, ka izany no mahatonga ny toe-javatra mihoapampana.
Valio i Yoshiki
Miarahaba anao, Yoshiki. Misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara lehibe.
Raha afaka manana anarana tsy fantatra anarana 100% amin'ny teknolojia ankehitriny ianao, dia mampiasa karatra tambajotra (tsy misy tariby) izay tsy nifandray tamin'ny Internet na solosaina halatra (izay mbola tsy tratra tamin'ny fakantsary nangalatra azy), «aircrack-ng ( famakiam-boky) »Mba hikarenjy sy hifandray amin'ny tambajotran'olon-kafa (Aleo ny WPA2), monero (mba tsy hanarahan'izy ireo ny vola ao amin'ny blockchain) sy ny tambajotra Tor (mba hanasarotana kokoa ny fanarahana ny meloka, miaraka amin'ny adiresy IP ).
Ny fanohanana cryptos tsy mitonona anarana 100% toa an'i Monero, ny olana amin'ny fampiasana vola azo tsidihina (bitcoin) na ho ela na ho haingana dia mitarika amin'ny fanivanana ary tsy tianao ny mpampihatra lalàna handrava ny varavaranao satria mila ny volanao hamatsiana ady na mangalatra tsotra izao aminao, etsy an-danin'izany jereo ny ampahany fanomezana amin'ny tetikasa sasany dia efa manaiky crypto izy ireo ary rehefa afaka manome aho (tsy izaho irery)
https://guix.gnu.org/es/donate/ - (tsy mampiasa monero, fa amin'ny fika dia azo atao ny tsy mitonona anarana) ary https://linuxmint.com/donors.php - (Ity monero ity dia mampiasa monero no manome be indrindra).
Cyber ​​Punk sy Crypto Anarchism
Miarahaba anao, Nemecis1000. Misaotra tamin'ny hevitrao. Tsy fantatro ny momba ny tetikasa Guix, ary faly aho fa isaky ny afaka manome vola ho an'ny Community ianao.
Salesforce dia manasonia fifanarahana voafaritra hahazoana Slack